« Jus » tongolo, manafina ny volofotsy
Maska manatsara ny volo “afro”
Anisan’ny karazam-bolo tena ilaina fikarakarana be ny karazam-bolo “afro”.
Maska miaro ny volo mibofoka
Toe-javatra tena manahirana ny vehivavy amin’ny volo matetika ilay izy mibofoka iny, toa lasa manaratsy ny endrik’ilay volo. Ity misy fomba iray hikarakarana ny volo manao toy izany.
Maska vahona, ikoloana volo “frisés”
Mahazo vahana eto amintsika tato ho ato ireo vehivavy tia mitazona ny volony natoraly izany hoe :
Maska tongolo gasy
Zavatra tsy dia fanao loatra ao an-trano ny mampiasa ny tongolo gasy amin’ny volo. Azo atao tsara anefa ny manao izany indrindra ho an’ireo izay te-hanalava volo amin’ny fomba tsotra.
Maska natoraly, ho an’ny volo mitera-menaka be
Mila fikarakarana sy “produits” manokana ny volo mitera-menaka mba hanamandina azy.
Ranona ovy sy tamenak’atody…mitsabo volo simba
Fantaro fa antony iray mahatonga ny tsy fahasalaman’ny volo ny tsy fikolokoloana azy amin’ny “soins” na amin’ny fampiasana akora natoraly manatsara azy. Iray amin’ireo “soins” azo hatao ao an-trano indray ity entina aminao ity.
Rehefa inona no manatona matihanina?
Misy ireo fikarakarana momba ny vatana izay ilana fahaizana sy teknika ny fanaovana azy. Tsy voatery ho voafehin’ny tsirairay anefa ny fanaovana azy. Ndao ary ho fantarina eto ambany ireo fikarakarana volo 5 tokony hamonjena toerana natokana ho an’ny volo (salon)
Anisan’ny zavatra manahirana ny akamaron’ny olona mahazo taona ny mitady fomba entina hanafenana ireo volo fotsy amin’ny volo. Izy io izay mipoitra tsikelikely noho ny fihenan’ny “melanine”sy ny “réaction du peroxide d’oxygène”.
Ny “facteur génétiques”, ny “stress”be loatra ary ny fomba fiainana amin’ny ankapobeny no anisan’ny antony mampisy ny volo fotsy. Misy ny fikarakarana azo hatao mba hanafenana ny volo fotsy tsy ho hita be satria izy ireny dia tsy afaka miala no sady mitombo foana. Ny tongolo eto no akora ampiasaina noho ny habetsahan’ny “soufre” ao aminy.
Fomba fikarakarana ilay “jus d’oignon”:
· Maka tongolo lehibe iray efa mivaofy dia kikiso.
· Tsihifo tsara dia alaivo ny ranony ary ampio ranona voasarimakirana kely.
· Iny fangaro iny avy eo no hosorana amin’ny volo ary somary arahina hotra malefaka rehefa manao azy.
· Avelao hiloana eo mandritra ny ora iray.
· Rehefa vita dia kombano amin’ny rano matimaty ary sasao amin’ny”shampooing” izay efa nahazatra anao amin’ny farany.
Ataovy in-droa isan-kerinandro ilay izy.
Ny voka-tsoa entiny:
Tsara ho an’ny fikarakarana ny volo fotsy izy ity satria:
-Manamafy ny fikorinan’ny rà indrindra ny any amin’ny faritry ny loha ity ranona tongolo ity.
-Manala ny angadrano ao amin’ny volo.
-Manampy amin’ny fitombon’ny volo ary manatsara ny volo simba ihany koa.